OZI & IHE |
Netting na ndozi
Nnụnụ na ndozi
Nnụnụ Nweghachi- Laser Light
Nyocha Solar Panel
Mbadamba Ogwe Aka
Ofufe ichu nta ™ Fly Killers
Ahụhụ Mgbaji Ahụhụ
Egbe Bait Gel Ngwa
Oke ọnyà ọnyà
Idide azụ Station ngwa
Ngwá Ọrụ Drain
Ọkụ eletrik Roden
Ndụ ọnwu ọnyà
OZI & IHE
Post oge: 08-12-2020
Ike NPMA dị na ike anyị iji kpokọta ndị isi egwuregwu bọọlụ nchịkwa kwa afọ na PestWorld. Dị ka ihe kachasị na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ijikwa ihe na-akpata ahụhụ na ụwa enweghị usoro kachasị mma maka ịmalite ọrụ na ngwaahịa na ịkwalite ...GỤKWUO »
Telex Environmental Trading Co., Ltd. (Ala Jinglong) abanyela na NPMA.
Site na mmepe nke Jinglong, a na-anabata ihe atụgharị anyị na ndị ahịa zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ nnọọ oge kwesịrị iji na-aga! Jinglong (Telex) ga-anọ ebe a mgbe ọ bụla ị nwere mkpa! GỤKWUO »
Nabata izute Jinglong na FAOPMA 2019. productsfọdụ ngwaahịa ọhụrụ ga-apụta. Bolọ ntu ahụ dị n'okpuru: othlọ ntu: A06 :bọchị: 24 (Tue) - 26 (Thu) Septemba, 2019 Ebe: 1F Exhibition Hall, DCC (Daejeon Convention Center), Daejeon, Korea GỤKWUO »
Na-egosi na PestEx 2019
Associationlọ ọrụ na-ahụ maka ọrịa na-ahụ maka ikuku na UK na-anọchite anya ụlọ ọrụ ndị otu 700 na-akparịta ụka na ndị mmekọ 3,000. A na-akwalite ihe omume anyị niile na magazin ụlọ ọrụ na-achịkwa pesti, yana ọtụtụ ngalaba metụtara. GỤKWUO »
Editiondị nke 6 nke Ptali Pest Italian Control Exhibition ga-eme 06th na 07th March 2019 na inlọ Mgbakọ Milan a ma ama na ama (MiCo 1st floor) Oge mmeghe: Wednesday March 06th 2019 site na 9.00am ruo 6.00pm Thursday March 07th 2019 nke 9.0 ...GỤKWUO »
Soro Parasitec Paris 2018 Aug. 30, 2018
Ebe mgbakọ ọhụrụ bụ ụlọ nyocha kachasị mma maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka pesti na ndị na-ekesa ya. Site na ndị ọrụ ọkachamara na ndị nrụpụta si ihe dị ka mba 30, Parasitec Paris, nke nwere ihe karịrị ndị ọbịa 2,800 n'oge ogbako ikpeazụ, gara n'ihu ịbụ ebe a na-ekwu okwu ...GỤKWUO »
Nzukọ Udo na Uche Mba Nile nke China 2018
N'ime afọ 11 gara aga, Nzukọ CIFSQ agbakọtara karịa ndị ọkachamara nchekwa nchekwa nri 8,000 na ndị ọkachamara sitere na mba 30 +. Anyị na-ele anya ịnabata gị na 2018. Attga China International Food Safety & Quality (CIFSQ) Conference bụ a fas ...GỤKWUO »
Anyị na-egosipụta na FAOPMA 2018 Septemba a
Federation nke ndi Asia na Oceania Pest Managers Associations bu ulo oru na-abughi ndi mmadu guzobere na 1989 site n'aka ndi otu sitere na mba Asia na Oceanic iji kwalite ma mepee ulo oru nlekota oru ndi ozo na mpaghara a. ...GỤKWUO »
Adreesị: Obodo Guoqiao, Yuqiao Town, Dongguang County, Cangzhou City, Province Hebei, China